दुखद खबर : आ८’ग’:ला’गी मा परी यी दुई क’लिला मुना हरूको अ’कल्पनीय नि:धन , पुरै परिवार शो:’क मा !
No Comments on दुखद खबर : आ८’ग’:ला’गी मा परी यी दुई क’लिला मुना हरूको अ’कल्पनीय नि:धन , पुरै परिवार शो:’क मा !
सोलुखुम्बु जिल्ला नेचासल्यान -२ निवासी टेक प्रसाद निरौला को नाति ७ वर्षिय सुगम निरौला र नातिनी ४ वर्षिय सुदिस्मा निरौला को अा’८ग:’लागीमा परेर भएको
अ८क:’ल्पनीय नि’८ध:’नले हामीलाई स्त८’ब्ध बनाएको छ । शो’:कको यस घडिमा मृ:’त आ:’८त्माको ची:’र शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्र८द्धाञ्जली व्यक्त
गर्दछौं। ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला *****
अफगान तनाव : अमेरिकी सेनाहरु, जो युद्द शुरु हुँदा जन्मिए, युद्धमै मारिए
No Comments on अफगान तनाव : अमेरिकी सेनाहरु, जो युद्द शुरु हुँदा जन्मिए, युद्धमै मारिए
एजेन्सी । बिहीबार स्टीव निकुर्ई एक तमासले टेलिभिजनको अगाडि बसिरहेका थिए । उनले टिभी छोड्ने नाम लिइरहेका थिएनन्। उनी आफ्नो छोराको बारेमा कुनै खबर आउछ की भनेर चिन्तित थिए। सोही समय ढोकामा ढकढक गर्दै आवाज आयो । एक नराम्रो खबर आयो ।
चकलेट बाँडिरहेको करीको त्यो भिडियो
स्टीव निकोलौका छोरा लान्स कर्पोरल करीम निकोउई काबुल एयरपोर्ट हमलामा मारिएका १३ अमेरिकी सैनिकहरु मध्ये एक थिए। एक दिन अघि २० वर्षीय करीमले आफ्नो घरमा एउटा भिडियो पठाएका थिए, जसमा उनी अफगानिस्तानका बच्चाहरुलाई चकलेट दिइरहेका थिए।
मर्नेहरुमा एक सिपाहीकी श्रीमती गर्भवती थिइन्, एकजनाका बुबा क्यालिफोर्निया पुलिस अफिसर थिए र एक ओहायोकी थिइन्। क्यालिफोर्नियाका नर्कोका स्टीव निकुईले फोनमा भने, उनी युद्ध सुरु भएको वर्षमा जन्मेका थिए। उनको जीवन युद्धसंगै समाप्त भयो। उनी सन् २००१ को कुरा गर्दै थिए, जब अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नो सैन्य अपरेशन सुरु गरेको थियो।
मारिनेहरुको नाम, परिवारलाई जानकारी तर औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरिएन
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले काबुल विमानस्थलमा मारिएका सैनिकहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छैन, तर उनीहरुको परिवारलाई जानकारी दिइएपछि उनीहरुको बारेमा थप कुराहरु बाहिर आउन थालेको छ। कट्टरपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेट, जो आफैंलाई इस्लामिक स्टेट भन्छ, ‘यी आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ।’
शुक्रवार, स्टीव निकुई एक अमेरिकी मरीन अधिकारीको लागि उनी र उनकी श्रीमतीलाई डेलावेयर एयर बेसमा लैजान पर्खिरहेका थिए। जहाँ उनको छोराको अन्तिम अवशेष ल्याईदै थियो ।
गर्भवती श्रीमती र गर्भका नानी छाडेर गए राइल
निकुईले भने, राष्ट्रपति जो वाइडेनले परिस्थितिलाई कसरी सम्हालेका हुन् ? त्यसबाट म साँच्चै निराश छु। र अझ धेरै जसरी सेनाले यसलाई सम्हालेको छ। जमिनमा रहेका कमाण्डरहरु यस खतराको बारेमा सचेत हुनुपर्ने थियो र रोकथामका उपायहरु लिनु पर्ने थियो ।’
काबुल एयरपोर्टमा मृत्यु भएका सैनिकहरुमा वायोमिंग प्रान्तका राइल म्याकोलम पनि थिए। उनी विवाहित थिए र उनकी श्रीमती छ महिनाकी गर्भवती थिइन्। राइलकी बहिनी रोयसले शुक्रवार एक फेसबुक पोस्टमा भनिन्, ‘मेरो दाई बाल्यकालदेखि एक समुद्री हुन चाहन्थे।सेवानिवृत्तिपछि इतिहास पढाउन चाहन्थे। बच्चाहरुलाई कुस्ती सिकाउन चाहन्थे। कुस्ती बाहेक, उनले वायोमिंगको ज्याक्सन होल हाई स्कूलबाट सन् २०१९ मा स्नातक हुनु अघि फुटबल खेले।’
वायोमिंग प्रान्तका राज्य निर्देशक जिलियन बैलोले भने, सेवा गरेको राष्ट्रको लागि आभारी छौं, एक आमा र अमेरिकीको हैसियतमा मेरो पीडा र आँशु कम हुने छैन। राइलको परिवार प्रति मेरो संवेदना।
रेगी स्टोनका छोरा एलाई पनि अमेरिकी सेनामा सामेल भएका थिए राइल म्याककुलम यो संगै सामेल भए। एलाइ र राइल राम्रो साथी थिए। रेगी स्टोन बताउँछन्, राइल स्मार्ट, बलियो र साहसी थिए। उनी आफ्नो देशलाई माया गर्थे र फरक पार्न चाहन्थे ।
मेरो स्मार्ट र हिरो दाई अरुलाई बचाउँदा मारियोः बहिनी मर्लिन
मर्लिन, नौसेना मेडिकल स्टाफ मैक्स साविकाको बहिनीले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्, ‘मेरो सुन्दर र स्मार्ट दाइ अरु मानिसहरुको जीवन बचाउँदा मारिएको थियो ।’
सोविकाको मृत्यु ओहायो सिनेटर रोब पोर्टम्यानद्वारा ट्विटरमा पुष्टि भएको थियो। उनको सुन्दर जीवनको एक झलक मैक्स सोवियाकको इन्स्टाग्राम पेजमा देख्न सकिन्छ। यी मा, कहिले काहिँ उनीहरु केहि समुद्र तटमा छन्, कहिलेकाहिँ उनीहरु स्कीइंगमा छन् र कहिलेकाहिँ उनीहरुका दुई साना बच्चाहरुसंग प्रस्तुत गरीरहेछन्।
वर्ष २०१९ मा एक इन्स्टाग्राम पोस्टमा, उनले लेखे, ‘म मात्र एक ठूलो दाई होइन। म कूल ठूलो दाइ हुँ। उसको अन्तिम पोस्ट अझ अशुभ लाग्यो। म्याक्सले जुन १० मा लेखेका थिए, ‘मार्नेछन् वा मारिनेछन् । ’
नेपालमा फेरी यो के भयो १६ बर्से छोरि र १२ बर्से छोरा अलपत्र (हेर्नुहोस भिडियो)
No Comments on नेपालमा फेरी यो के भयो १६ बर्से छोरि र १२ बर्से छोरा अलपत्र (हेर्नुहोस भिडियो)
कृष्ण परियार एक कुसल र चर्चित पत्रकार हुन । उन्ले एस्तै सामाजिक गतिबिधी लाई नियाल्ने काम गर्दछन । अहिले सम्म धेरै गरीब दु,खिहरु लाई सयोग गरिसकेको छ । आउनुश हेरै यो भिडियो जुन भर्खरै सार्बजनिक भएको छ।